Shiinaha Labo Warshad Lock Air Madax Warshad iyo soosaarayaasha | Yahuuda
Laba qalab oo waalka hawada lagu xidho ayaa ah qalab wax lagu xidho oo buuxa oo ay soo saartay shirkadeena iyadoo loo eegayo xaaladda dhabta ah ee wax soo saar.
10. Nidaamka qufulka hawada
Qalabka waalka-qufulka hawo laba-heer ah: waa mid ka mid ah geeddi-socodka lama-huraanka u ah soo-saarka foornada usheeda dhexe ee lime. Qalabka guud ee ka saarista dambaska waa in la joojiyo hawada iyo dambaska qaaca, qalabkani waa inuu hawo ilaaliyo oo uu xiro dambaska: inta lagu gudajiro ka saarista dambaska, sababo la xiriira meertada meertada ee labada baffilyood, hawada gubashadu kama daadaneyso qaybta hoose, taas oo si wax ku ool ah u hagaajin karta tayada iyo soosaarka lime.
Qaab-dhismeedka qalabka: aaladdu waxay ka kooban tahay qaybta hoose iyo hoose ee sanduuqa baffle, sanduuq kasta oo qalad ah wuxuu ka kooban yahay baffle, cududda dhagaxa gudaha ah, dunmiiqa, gacanta dhagaxa banaanka ah, silsilad, qalabka kalluunka loo yaqaan 'solenoid valve', qalabka xakamaynta xawaaraha, qaybta pneumatic, qaybta saliidda (tixraac sawirka ku lifaaqan).
Halbeegyada qalabka: tusaalaha JD200-JD300 、 awoodda dejinta ash ee 70 T / h-100T / h 、 cadaadiska shaqada 0.4 MPa-0.4MPa
Soosaarka 100-300 T / D temperature Heerkulka shaqada <100 ℃ 5000 kg- <100 ℃ 8000
Mabda'a qalabka: Falka laba waji leh ayaa si isdaba joog ah ugu shaqeeya koontaroolka korantada si loo hubiyo in hawo gubashadu aysan ka soo bixin qaybta hoose. Mashiinka waalka laba-weji waxaa si iskiis ah u furay ama u xiray gacanta dhagaxa hoostiisa ee hawlgalka kale ee dhululubo ah. Markuu khaatumada kore la furo, dambaska dhammeeyay ee ka soo jeeda qabiilka sare ilaa qeybta sare ee jirka, ka dib marka uu xirmo baaburka sare, baafka jirka waalka hoose ayaa la furaa, dambaskiina dhammaaday ee xusuusta jirka waalka sare ayaa ku dhici doona dhammaadka suunka sheyga iyada oo loo marayo jirka hoose ee waalka si loo dhammeeyo ficil saarista dambaska.
Noocyada furayaasha hawada:
qalab wata mashiinka ash ee afar-geesoodka ah, ee sii deynta ash ee joogtada ah si ay foornada si fiican u xirto, ma saameynayso hawo gubashada hawada joogtada ah.
b geeddi-socodka ka-saarista ash ma tuujinayso, waxyeello u geysanaya liinta.
c diyaarinta hawlgalka qalabka, lagu kalsoonaan karo, oo bilaash ah dayactirka joogtada ah, heerka hoos u dhaca yar.
Hore: Taageere guban
Xiga: Mashiinka Daadinta Lime-ga
Dilaa Yuhuudda- 300 tan / maalintii X4 liinta dusheeda ee Luoyan ...
Qalabka Khadka Kaalsiyam Hydrokside Line, Kaalshiyamka Kaalshiyamka iyo Kaalshiyamka hydroxide, Magaca Ganacsiga ee Kaalshiyamka Kaalshiyamka, Qalabka Kaalsiyam Hydrokside, Sameynta Kaalshiyamka Hydroxide, Sameynta Kaalshiyamka Hydroxide,